Cetelem ajoina iyo Apple Pay sevhisi nemakadhi ayo | Ndinobva mac
Izvo zvakatomboita kunge zvisinganzwisisike kuti Cetelem, chinova chikamu chinobata kukweretesa mari kune vashandisi vanoda kutsigira Apple kutenga, havana kadhi ravo rakawedzerwa sekuwadzana neApple Pay. Zvakanaka, maawa mashoma apfuura Cetelem akatumira ruzivo kune vatengi varo izvo Master Cards inogona kuwedzerwa kune Apple sevhisi.
Nenzira iyi, vashandisi vane makadhi ekambani ino yezvemari vanogona ikozvino kuwedzera Apple Pay uye kuwedzera kadhi racho zvakananga muapp. Nguva inofamba uye tinoramba tichiona iyo isingaregi kufambira mberi kweiyi yakachengeteka, yakavimbika, inokurumidza uye inoshanda nzira yekubhadhara
Izvi ndizvo chiziviso chesangano nezve kusangana uku kwemakadhi ako neApple yekubhadhara sevhisi:
Munguva yemwedzi waKukadzi, takafambira mberi kuti vatengi veCetelem Mastercard kadhi vanogona kubhadhara nekukurumidza uye zvakachengeteka na Cetelem uye Apple Bhadhara. Zvino, nekuda kwekuvandudzwa kwazvino kweCetelem App, unogona kunyoresa Mastercard yedu muApplePay, usingasiye App yedu, uye mumasekondi mashoma.Nekunyorwa kweCetelem kadhi muApple Pay, unogona kubhadhara nekukurumidza , yakasununguka uye yakachengeteka kubva kune yako iPhone, Apple Watch, iPad uye Mac.
Zvinoita sekunge kufambira mberi kwerudzi urwu rwezvikwereti zvisina kutaurirana hakugone kumiswa saka mikana yakawanda yatiinayo kubhadhara kutenga kwedu, marisiti nevamwe, zvinogara zvakanaka. Zvino izvo zvatinotarisira ndizvozvo Apple ramba uchivhura iyo NFC kuti uwane mamwe mabhadharo kana masevhisi yekutakura vanhu uye nezvimwe sezvazvinoitika kune dzimwe nyika nemamwe mapuratifomu ekubhadhara. Parizvino izvi zviri padivi izvozvi uye zvinoita sekunge pasina mafambiro kupfuura mabhengi masosi uye online kubhadhara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Cetelem ajoina iyo Apple Pay sevhisi nemakadhi ayo